အသာရတုန်း မဆင် မခြင် ရသလောက် လက်တစ်ဆုံး နှိုက်. နိုင်ငံရေး မပါးနပ်ခြင်း ကြောင့် ဝဋ်အကြီးကြီး လည်နေတဲ့ တရုတ် – Let Pan Daily
“နိုင်ငံရေး က ပါးနပ် ရတယ် … ပါးနပ်လေလေ အောင်မြင်လေလေ ပဲ ။ ”
ပါးနပ်တယ် ဆိုတာ အခြေအနေ အချိန် အခါ ကို ကြည့်ပြီး လှုပ်ရှား တတ်တာ ကို ခေါ်တာ ။ မလိုအပ် တဲ့ အချိန် မှာ ကြောင်လက် သည်း ဖွက်နေတတ်ရပြီး လိုအပ်လာ ရင် ခြင်္သေ့ လို အားကုန်ထုတ်သုံး ရတယ် ။ ခြင်္သေ့ က ဆင်ပြောင်ကြီး နဲ့ ပဲ တွေ့တွေ့ ယုန်သူငယ်နဲ့ ပဲ တွေ့တွေ့ သူတိုက်ခိုက်မယ်ဆို အားကုန်ထုတ်တယ် ။ မလိုအပ်ရင် သူ့ဘေး သမင်မြက်စားနေတောင် လှည့်မကြည့်ဘူး။
တရုတ် အမေရိကန် ပြ ဿနာ မှာ အမှန်တော့ တရုတ်မပါးနပ်မှု တွေကြောင့် တစ်စတစ်စ နဲ့ အမေရိကန် ရဲ့ စစ်ရေးနဲ့ ခြိမ်းခြောက်ပြီး အကျပ်ကိုင်ခံလာရတဲ့ အထိ ဖြစ်လာတဲ့ အပြင် က မ္ဘာ ကပါ တရုတ်ဆိုတာ ဘယ်လိုဆိုပြီး ဝိသေသ တတ်တာပါခံလိုက်ရတာ။ မပါးနပ်မှု ဆိုတာထက် အနေအထားအရ လို့ ပြောရင် ပိုမှန်မယ် ။ အချုပ်ကတော့ စနန်ကြောင့်ပါ ။ ဒု တိ ယ ကမ္ဘာစစ် တွင်းမှာ အ မေရိကန် သမ္မတ ထရူးမင်းက ကွန် မြူ နစ် စနစ် ဟာ သူတို့ရဲ့ အား နည်း ချက် တွေ ကြောင့် သေချာ ပေါက် တစ်ချိန် မှာ ကျရှုံး သွားလိမ့်မယ်လို့ ပြော ခဲ့တယ် ။
( အခု ပြော မယ့် ကိစ္စက တရုတ် အ မေရိကန် ကိစ္စဆို ပေမယ့် မြန်မာ နိုင်ငံက နိုင်ငံ ရေး ( ဘက် စုံ ) က လူ တွေလည်း ဖတ် ပြီး ကိုယ်နဲ့ ကိုက်တာ တွေး ကြည့် ကြ ပေါ့ )
Hong Kong students and Taiwanese supporters hold slogans duringamarch in Taipei, Taiwan, Sunday, Sept. 29, 2019. Sunday’s demonstration was part of global “anti-totalitarianism” rallies planned in over 60 cities worldwide, including in Australia and Taiwan, to denounce “Chinese tyranny.” (AP Photo/Chiang Ying-ying)/2019-09-29 20:14:53/
အခု အမေရိကန် ရေတပ်အုပ်စု က တရုတ် ထုင်ဝမ် တောင်ပိုင်း ရေပြင်ကို ဝင်လာတာ တရုတ်နိုင်ငံ ပိုင်နက်ထဲ အနားထိရောက်လာတယ် ။ ထိုင်ဝမ် တို့ ဟောင်ကောင်တို့ ဆိုတာ တရုတ်နိုင်ငံ နဲ့ ဘယ်လောက်နီးကပ်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံအတွက် ဘယ်လောက်အချက်အခြာကျ ၊ ဗျူဟာကျလည်းဆိုတာ ဖော်ပြထားတဲ့ ပုံမှာကြည့်ပါ။
အ မေရိကန် က ထိုင် ဝမ် နဲ့ တ ရုတ် ၊ ဟောင် ကောင် နဲ့ တရုတ်ကို တ မင် ပြဿနာ ရှာ ထားတာ ။ ဒါ ပေမဲ့ အ မေ ရိ ကန် တွေ က ပြ ဿနာကို သူ တို့ အချင်းချင်း ပဲ အိုး မဲ သုတ် ရန်တိုက် ပေးထာ တယ် ။ တ ရုတ် တို့ မြန် မာ နိုင် ငံ ကို လုပ်သလို ပေါ့ ။ “နိုင်ငံရေး က ပါးနပ် ရတယ် … ပါးနပ်လေလေ အောင်မြင်လေလေ ပဲ ။ “ သူ တို့ အချင်းချင်း မတည့်လို့ ငါတို့ က အားနည်းတဲ့ ဖက် မ တ ရား အ နိုင် ကျင့်ခံရ မှာ စိုး လို့ ဆို တဲ့ အ ကြောင်း ပြ ချက် မျိုး နဲ့ အ မေရိကန် က ထိုင်ဝမ် ကိုလက်နက် ရောင်း နေ တာ ။ ( မြန် မာ သူ ပုန် တွေ ကို တ ရုတ် FN6 တွေ ရောင်း ပေး သ လို မျိုး )
ဒီ အ ချိန် မှာ ထ ရမ့် အ မေ ရိ ကန် မှာ သ မ္မ တ ဖြစ် လာ တယ် ။
သမ္မတ ထ ရမ့် က မွေးကထဲ က သူ ဌေးသား လူချမ်းသာ ။ သူ့ ဖာသာသူ စီး ပွား ရေးလုပ် တော့ လည်း ဘီလီယံနာ ဖြစ်လာတယ် ။ နိုင်ငံ ရေး အစဉ်အလာ မရှိ ပေမယ့် အ ခန်း အ နား တစ်ခု မှာ သ မ္မ တ အို ဘား မားရဲ့ စကားလုံး နဲ့ နှိပ် ကွက် တာ ခံလိုက် ရ တာ ကို မ ကျေမနပ် ဖြစ် ပြီး သူ သ မ္မတ ဘဝ နဲ့ ပြန်လက်စား ချေ မယ်ဆို တဲ့ စိတ် နဲ့ သ မ္မ တ ဖြစ် လာတဲ့ သူ ။
နိုင်ငံ ရေး က စီးပွား ရေး ပဲ ။ စီး ပွား ရေးက နိုင် ငံ ရေးပဲ ။ စီး ပွား ရေး အောင် မြင် အောင်လုပ် ပေးရင် နိုင် ငံ ရေး အောင် မြင်တယ် ။ စီးပွား ရေး မ အောင် မြင် ရင် ၊ ပြည် သူ တွေငတ် နေ ရင် သိ ကြားမင်းလည်း မဲရ မှာ မဟုတ် ဘူး ။ ( ဒီ ကိ စ္စ ကို မြန် မာ နိုင် ငံ က ဒေါင် ဒေါင် မြည်ဆို တဲ့ နိုင် ငံ ရေးသမား တွေ ၊ ဒေါင် ဒေါင် မြည်ဆို တဲ့ ထောက် ခံ သူ တွေ မသိ ကြ ဘူး ) စီးပွား ရေး ကို အောင် မြင် အောင် လုပ်တတ်တဲ့ သူက နိုင် ငံ ရေးလည်း အောင် မြင် အောင်လုပ် နိုင်တယ် ။ ခက်တာ စီး ပွား ရေး သမား တွေ က နိုင် ငံ ရေးမှာ သူ့ အ ချိန် တွေ ကို မ ဖြုန်းချင် ကြဘူး ။ ဒါ ကြောင့် ဘယ် နိုင် ငံက သူ ဌေး ကြီး တွေမှ နိုင် ငံ ရေးဝင် မလုပ် ကြဘူး ။
သူ ဌေး ကြီး တွေ နိူင် ငံ ရေး လော က ထဲ ဝင် တာ အာ ဏာ ရှင် လုပ် ခွင့် ရ လို့ ပဲ ။ သူ့ စီး ပွား ရေး ကို နိုင် ငံ ရေး နဲ့ ပေါင်း ပြီး ပို ကြီး ကျယ် အောင် လုပ် ဖို့ ပဲ ။ ဒါ ပေမဲ့ သူ့ကို လူ ကြား ထဲ အရှက် ရ စေ ခဲ့ တဲ့ အိုဘားမားကို ပြန်ကလဲ့ စား ချေ ချင်တာ ရယ် ၊ သူ့ ( နိုင် ငံ ) ထက် တ ရုတ် က ပို ချမ်း သာ လာ တာ ရယ် ကို ကြည့် မ ရ တာ ကြောင့် ဒေါ် နယ်လ်ထ ရမ့် သ မ္မ တ ဖြစ် အောင် လုပ်ခဲ့ တယ် ။
သ မ္မ တ ဖြစ် တာ နဲ့ အို ဘား မား ကို ပြန် တုန့် ပြန် ပြီး တ ရုတ် ကို စ တိုက် ခိုက် တယ် ။
တရုတ် တို့ ရဲ့ ရပ်တန့်ဖို့ ခက် မယ့် 5G နဲ့ Huawei ကို လှုတ် မ ရ အောင် အ သေချုတ်လိုက် ပြီး ကုန် သွယ်ရေး စစ် ဖြစ် စေ ခဲ့ တယ် ။ အ နိုင်ရလာတဲ့ အ ချိန် မှာ ရေး ပြ ခဲ့သလို တ ရုတ်မပါးနပ်ပဲ Covid 19 ကို ခု တုံးလုပ် ပြီး တောင်တရုတ်ပင်လယ် နဲ့ အိမ်နီးချင်း တွေ မှာ ဗြောင်နယ်ချဲ့ အ နိုင်ကျင့်လာတယ် ။
အရင် အာ ဖ ရိ က နိုင် ငံ တွေ ၊ တောင် အ မေ ရိ က နိုင် ငံ တွေ ၊ အ ရှေ့ တောင် အာ ရှ နိုင် ငံ တွေ မှာ တ ရုတ် တို့ တစ် ဖက် စောင်း နင်း ရ ယူ နေ တာ ကို မြောက် ကို ရီး ယား အီ ရန် ၊ အာ ရပ် တွေ နဲ့ အ ပေး အ ယူ သ ဘော မျိုး ရှိ နေ ရာ က နေ Covid 19 မှာ WHO အ ဖွဲ့ ကို ခု တုံး လုပ် လာ တယ် လို့ အ မေ ရိ ကန် တွေ ယူ ဆ လိုက် တော့ ပို ပြင်း ထန် တဲ့ အ ရေး ယူ ဖို့ တွေ မြန် မြန် ဖြစ် လာ တယ် ။ မြန် မြန် ဖြစ် လာ တယ် ဆို တာ သမ္မတ ထရမ့် ကုန် သွယ် ရေး စစ်မှာ မ နိုင် ရင် အခု မလုပ် လည်း သေ ချာ ပေါက် နောက် လုပ်မယ့် အရာ တွေ ဖြစ် လို့ ပါ ။ ဘာ ဖြစ် လို့ လဲ ဆို တော့ တရုတ် က သူ့ အင် ပါ ယာကို OBOR ဆို တဲ့ BRI နဲ့ ချဲ့ ထွင်ဖို့ ကိ စ္စ အောင် မြင် တော့ မလို ဖြစ် လာ ခဲ့ လို့ ။
BRI က ဝင်မပါရင်လည်း ကျန် ခဲ့ မှာ ဖြစ် ပြီး ဝင်ပါရင်လည်း တရုတ် ရဲ့ ကိုလိုနီ လက်သစ် နိုင် ငံ တွေ ဖြစ်ရလိမ့်မယ် ။ BRI မှာ ပါ ဝင် တဲ့ နိုင် ငံ ငယ် ကော နိုင် ငံ ကြီး ကော ရွေး ချယ် ခွင့် မ ရှိ တ ရုတ် ကို လို နီ လက် သစ် နိုင် ငံ တွေ ဖြစ် ကြ ရ မယ် ။ ဘယ် လို ဖြစ်မှာလဲ ဆို တော့ တရုတ်ရဲ့ BRI စည်း ကမ်း အ ရ ကုန် ပ စ္စည်း တွေ တံခါးမ ရှိ ဓားမရှိ သွားလာခွင့် နဲ့ အတူတရုတ် တွေ တံ ခါး မ ရှိ ဓား မ ရှိ BRI ပါ တဲ့ နိုင် ငံ တိုင်း ကို ရောက် နေ ပါ တော့မယ် ။
တ ရုတ် က အရင်လမ်း အားလုံး ရောမ ကို ဦး တည် နေတယ် ဆို သလို အခုလမ်း အား လုံး တရုတ်ကို ဦး တည် စေချင် နေ တာ ။
ပါးနပ်လေလေ အောင်မြင်လေလေ နယ်စပ် အထပ်ထပ် ချထားတာ တောင် ပလက်ဝ က A A လက်ထဲ FN6 လို ပုခုန်းထမ်း လေယာဉ်ပစ် လောင် ချာ ရောက် နိုင် သေး ရင် BRI ရ ထား ကြီး ပေါ် မှာ အ နု မြူ ဗုံး တောင် သယ် သွားလို့ လာရ လိမ့် မယ် ။
တ ရုတ် တို့ Covid 19 နဲ့ အ တူ အိမ်မက် တွေ ပျောက် သွားဖို့ အ ချိန် အ ကြာ ကြီး မရ တော့ ဘူးလို့ ပဲ ပြော ရင်ရလိမ့် မယ် ။ ဘာ တွေ ဖြစ် နိုင်လဲလို့ မေး ရင် အ ကုန် ဖြစ် နိုင် တဲ့ အ ခြေ အ နေ ပေါ့ ။ ဖြစ်ဖို့ ရွေးချယ် ခွင့် တရုတ် လက်ထဲ မှာ မရှိ တော့ဘူး လို ဖြစ်လာတယ် ။ အသာရတုန်း မဆင်မ ခြင် ရ သ လောက် လက်တစ်ဆုံး နှိုက် တတ်တဲ့ တရုတ် အတွက် တော့ နောက် အတွက် သင်ခန်းစာ ရ တာ ပေါ့ ။ ( မြန်မာ နိုင် ငံ က နိုင် ငံ ရေးသမား တွေ ၊ ထောက်ခံ သူ တွေ ၊ အ သာ ရတုန်း ဆဲမယ် ဆိုတဲ့ သူ တွေလည်း နမူနာယူ ကြပေါ့ )
လောကကြီး မှာ ရိုးသားမှု မရှိတဲ့ တစ်ဖက်သတ် အနိုင်က ကြာရှည်မခံပါဘူး..။
မိုး တင့် ( ရန် ကုန် တ က္က သိုလ် )
(၁၀)နှစ်သား အရွယ် ကောင်လေးကြောင့် ကိုယ်ဝန် ရခဲ့တယ် ဆိုတဲ့ (၁၃)နှစ်ကောင်မလေး၊ အဖြစ်မှန် ကို ပြန်ရှင်း